स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्न प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्न प्रार्थना गर्नुहोस्
आज हामी परमेश्वरको आवाज स्पष्टसँग सुन्नको लागि प्रार्थनाको साथ व्यवहार गर्ने छौं। यति धेरै मानिसहरू छक्क पर्दछन् कसरी परमेश्वरका मानिसहरूले ईश्वरबाट सुने। मैले कसैलाई यस्तो प्रश्न गरेको देखेको छु कि के परमेश्वर हामीसंग तपाईसँग बोल्नुहुन्छ जस्तो गरी बोल्नुहुन्छ? कोही मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन् कि तिनीहरूले पनि परमेश्वरबाट सुन्न सक्छन्। ठिक छ, यदि तपाईं नयाँ गरी ईसाई हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग परमेश्वरको क्रिस्टल स्पष्ट सुन्नको लागि लिंक वा पहुँच छ।
यस प्रार्थना गाईडले तपाईंलाई परमेश्वरको आवाज चिन्न र स्पष्टसँग सुन्नको लागि तपाईंको आध्यात्मिक इन्द्रिय अंग खोलेर तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। परमेश्वरको आवाज स्पष्ट रूपमा सुन्न एक चीज हो, यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि यो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्ने अर्को चीज हो। शमूएलको पुस्तकमा, जब परमेश्वरले उनलाई एक महान भविष्यवक्ता बन्न चाहनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले शमूएललाई धेरै पटक बोलाउनुहुन्छ। शमूएलले परमेश्वरको आवाज गरे, तर एलीले भनेका थिएनन् कि ईश्वरले कुरा गरिरहेको थियो भनेर उसले चिन्न सकेन। धन्यबाद उहाँ एली जो प्रधान पुजारी थिए उहाँलाई सिकाउन को लागी उहाँलाई थियो यो परमेश्वर थियो। म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि यो प्रार्थना मार्गदर्शन पूरा गरिसकेपछि तपाईले परमेश्वरको नाम स्पष्टसँग येशूको नाममा सुन्नुहुनेछ र अनुग्रह पाउनुहुनेछ कि यो कुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईंलाई आदेश दिन्छु कि भगवानले तपाईलाई भित्र दिनुहुन्छ। येशूको नाम।
जब मोशा मरूभूमिमा यित्रोका भेडाहरूको हेरचाह गर्दै थिए, उनले जलिरहेको आगोको भट्टीमा परमेश्वरलाई देखे, तर त्यसपश्चात आगोको बावजूद पोथ्रा जल्दै थिएन। उसको जिज्ञासाले उनलाई गहिरो प्रभाव पा .्यो जब उनले आगोको नजिक अझ राम्ररी हेर्नको लागि कदम बढाए, जुन उनले परमेश्वरको आवाज स्पष्टसँग सुने। तपाईं ईश्वरबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको आत्मिक सञ्चारको लागि सतर्कता छ भने। म प्रार्थना गर्दछु कि यस प्रार्थना मार्गनिर्देशनको सद्गुणले, तपाईको आध्यात्मिक संचार इन्द्रिय येशूको नाममा खोलिनेछ। भजनको पुस्तकले भन्छ, एक पटक परमेश्वरले बोल्नुभयो, दुईपटक मैले यो सुनेको छु कि सारा शक्ति परमेश्वरकै हो। म आदेश दिन्छु कि येशूको नाममा हुने शक्तिले तपाईंले येशूको नाममा परमेश्वरको आवाज स्पष्ट रूपमा सुन्नुहुनेछ।
तपाईंको जीवनमा त्यो पाप जुन तपाईं र परमेश्वरबीचको सञ्चार प्रवाहमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ, म प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वरले अब येशूको नाममा यसलाई हटाउनुहुनेछ। सत्य, परमेश्वर, हरेक समय बोल्नुहोस्, यो हरेक व्यक्तिको अधिकार हो कि हामी सँधै सचेत रहनु पर्छ। जब शाऊलको जीवनमा पाप आउन थाल्यो, उसले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनथ्यो, दाऊदले वीणा बजाए सम्म उसले आफू र परमेश्वरबीचको सम्बन्ध महसुस गर्दैनथ्यो। पाप मानिस र परमेश्वरबीचको सञ्चार प्रवाहमा अवरोध हो, पाप निकाल्नुहोस् र तपाईंले सबै समयमा भगवानसँग बोल्नुहुनेछ तपाईंले सुन्नुहुनेछ। प्रेरितको प्रेरितको पुस्तकमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रतिज्ञा गरेको छ कि अन्तमा म सबै आत्मामा मेरो आत्मा खन्याउनेछु, तिम्रा छोरा-छोरीहरूले अगमवाणी गर्नेछन्, तिम्रा बुढा मानिसहरूले सपना देख्नेछन् र जवान मानिसहरूले दर्शन देख्नेछन्। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, म आदेश दिन्छु कि परमेश्वरको आत्मा अहिले नै तपाईंको नाममा येशूको नाममा आउनुहुनेछ र प्रकाशको पोर्टल येशूको खातिर तपाईंको खातिर खुल्नेछ।
प्रभु येशू, म आज तपाईंको सामुन्ने आउँदैछु किनकि म तपाईंको सोर सुन्न चाहन्छु। म तपाईंसँग सधैं बोल्दछु, जसरी तपाईं पुरानो भविष्यवक्ताहरूसँग बोल्नुहुन्छ, जसरी तपाईं आफ्ना छोरा-छोरीहरू र सियोनका छोरीहरूले तपाईंको अनुसरण गर्न संसारलाई त्यागेका थिए, म पनि बिन्ती गर्दछु कि तपाईं मसँग स्पष्टसँग बोल्नुहोस्। येशूको नाम।
म अहिले येशूको नाममा मेरो सबै आध्यात्मिक इन्द्रिय अंगहरू अनलक गर्छु। मेरो आध्यात्मिक आँखा खोलियो, येशूको नाममा मेरो आध्यात्मिक कान खोलियो। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको आत्मा ममा आयो, मेरो आत्मालाई मेरो जीवनलाई पुनरुत्थान पार्ने आत्मा, तपाईंले प्रेरितहरूको प्रेरितको पुस्तकमा हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको आत्मा, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि अब येशूमा यो तपाईंको नाममा मेरो लागि अवश्य तल आउनु होस्। ।
हे प्रभु येशू, म तपाईसंग बोल्छु जब यो स्पष्ट हुन्छ, मलाई तपाईको आवाज चिन्न को लागी प्रार्थना गर्दछु, म तपाईलाई येशूको नाममा मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। तपाईंले बोल्ने बित्तिकै अनुग्रह, तपाईको कुरा बुझ्ने शक्ति, म तपाईलाई येशूको नाममा मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु।
हे प्रभु, म मेरो जीवनमा पापको हरेक शक्तिको विरुद्धमा छु। हरेक पाप जुन तपाईसँग मेरो आत्मिक सम्पर्कलाई रोक्दछ। हरेक पाप जसले मलाई तपाईंको आवाज स्पष्ट रूपमा सुन्न रोक्दछ, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूको नाममा यसलाई लिनुहुनेछ। हे प्रभु, म जहिले पनि तपाईंबाट सुन्न चाहन्छु किनकि म जान्दछु कि तपाईं जहिले पनि बोल्नुहुन्छ। म तपाईं मेरो जीवन, भाग्य, र उद्देश्य को बारे मा मसित कुरा गर्न चाहन्छु, प्रभु येशूको नाममा मलाई बोल्नुहुन्छ।
म वरिपरि रहेका सबै शक्ति र राजकुमारहरूका बिरूद्ध आउँछु जसले मलाई तपाईंबाट, हरेक वातावरणीय शक्तिले सुन्न अस्वीकार गर्दछ, म तिनीहरूलाई येशूको नाममा पवित्र आत्माको आगोले नष्ट गर्दछु। धर्मशास्त्र भन्छ एक पटक तपाईले बोल्नु भयो, दुईपल्ट मैले सुनें कि सबै कागज तपाईकै हुन्। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंको शक्तिले गर्दा तपाईंले येशूको नाममा तपाईंको आवाज क्रिस्टल सुन्नदेखि रोक्ने हरेक शक्ति र अवरोधलाई नष्ट गर्नुहुनेछ।
प्रभु येशू, म तपाईंमा आफ्नो आत्मा खन्याउन चाहन्छु। तपाईको आत्माले मलाई मानसिक र आध्यात्मिक सतर्कता प्रदान गर्दछ, म तपाईलाई येशूको नाममा मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। प्रभु येशू, आज मेरो नाममा येशूको नाममा मेरो कान अनलक गर्नुहोस्।
अबदेखि जब म येशूको नाममा ईश्वरले मेरो साथ बोल्नुहुन्छ म दुब्लाउने छैन।
अघिल्लो लेखमाभगवान मेरो माध्यमबाट बोल्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
अर्को लेखमाअभिभावक एन्जिल संरक्षण को लागी प्रार्थना
ज्याकलिन जुन 14, 2021 11 मा: 54 बिहान
यो प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। कृपया टाइपिंगमा केहि शब्दहरूमा जाँच गर्नुहोस्।
जहाँ शक्ति छ यो कागज पढ्छ। भगवान तपाईंको सेवा मा आशीर्वाद दिनुहोस्।
नाथिन लेन सेप्टेम्बर १, २०२० बिहान :3::2021 बिहान
यदि म भगवानको आवाज सुन्दै छु भने मेरो जिब्रो सार्नु पर्छ जस्तै कि मँ वास्तव मा कुरा गरिरहेको छु?
जुवा को आत्मा बाट छुटकारा प्रार्थना
छुटकाराको लागि प्रार्थनाहरु को लागी वित्तीय को लागी श्राप